Hapana vanokuvadzwa: Kudengenyeka kwenyika kune simba kunoitisa Greece, Cyprus neTurkey
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Greece Kupwanya Nhau » Hapana vanokuvadzwa: Kudengenyeka kwenyika kune simba kunoitisa Greece, Cyprus neTurkey
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cyprus Kupwanya Nhau • Egypt Kudzokorora Nhau • Greece Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Hapana vanokuvadzwa: Kudengenyeka kwenyika kune simba kunoitisa Greece, Cyprus neTurkey.
Kudengenyeka kwenyika kune simba kwakakwenya Crete mumavhiki apfuura, kuuraya munhu mumwe nekukuvadza zvivakwa. Nyanzvi yekudengenyeka kwenyika yechiGreek yakati kudengenyeka kweChipiri kwakabva mukukanganisa kwakasiyana kweAfrica uye hapana kumwe kudengenyeka kwenyika kwakatarisira.
Kukura kwekudengenyeka kwakayerwa pa6 uye kudzika pa37.8km (23.5 mamaira) neUnited States Geological Survey.
Vakuru veTurkey vanodzora njodzi, Afad, vakazivisa nzvimbo iyi pa155km kubva kumahombekombe eTurkey.
Kudengenyeka uku kwakakura kusvika pamatanhatu kwakarova 6km (155 mamaira) kubva kuguta rekushanyira reKas, mudunhu reAntalya.
Kudengenyeka kwenyika kune simba, kwakakura 6 kwakarova maguta kumatunhu akati wandei muEastern Mediterranean manheru ano.
Kudengenyeka uku kwakazunza zviwi zvakati wandei muGreek nedzimwe nzvimbo muEastern Mediterranean, kusanganisira nharaunda yekumaodzanyemba kweAntalya kuTurkey pamwe nemaguta eEgypt.
Kudengenyeka kwacho kwakanzwika kuzvitsuwa zveKarpathos, Crete, Santorini neRhodes kuGreece neMuvhuro.
Kudengenyeka kwenyika kwakazungunusawo guta guru reCypriot Nicosia, Beirut muLebanon, Cairo nemamwe maguta muEjipitori, mativi eIsrael nePalestine Territories, nedunhu rakatenderedza kumaodzanyemba kweTurkey Antalya.
Afad akati kudengenyeka uku kwakakura kusvika pamatanhatu kwakarova 6km (155 mamaira) kubva kuguta rekushanyira reKas, mudunhu reAntalya.
Gavhuna wedunhu raKas, Saban Arda Yazici, vakati zviremera havasati vagamuchira chero nhoroondo yekukuvara kana kukuvara muKas kana nharaunda dzayo.
Vhiki rapfuura, kudengenyeka kwegungwa kwakakura 6.3 padyo neCrete kwakavhundutsa vanhu. Yakanzwika kure kure seguta reGreek, Atene, mamaira mazana mana (400 mamaira) kure.
Mavhiki matatu apfuura, kudengenyeka kwakafanana paCrete kwakauraya munhu mumwe chete.
Turkey, zvakadaro, inogara pamusoro pemakona makuru mitsetse uye kudengenyeka kwenyika kunowanzoitika. Vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vakafa mukudengenyeka kwenyika kune simba kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweTurkey muna 17,000.